के तपाईले अम्बाको पात खानु भाको छ ? अम्बाको पात सेवन गर्दा हुने फाइदाको बारेमा जानिराखौँ ! – Khabar Patrika Np
के तपाईले अम्बाको पात खानु भाको छ ? अम्बाको पात सेवन गर्दा हुने फाइदाको बारेमा जानिराखौँ !
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ ०७, २०७८ समय: २०:०९:१७
हाम्रै घर तथा वरपर पाईने कतिपय यस्तो चिजहरु जसको प्रयोग र फाइदाको बारेमा हामी अन्जान रहेका हुन्छौँ र सानो समस्यामा पनि केमिकल युक्त बजारमा पाईने औषधी सेवन गर्ने गर्छौँ । कतिपय घरेलु जडिबुटीले पनि धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
आज हामी त्यहि जडिबुटीको रुपमा लिईने अम्बाको पातको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । अम्बा तपाइ हामी सबैलाई थाहा छ । हामी अम्बा निकै स्वाद लिएर खाने गर्छौँ तर त्यहि अम्बाको पात सेवन गर्नु पनि निकै फाईदा हुन्छ भन्ने हामी मध्ये कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ ।
अम्बाको पात एन्टीअक्सिडेन्ट, एन्टीब्याक्टेरियल जस्ता गुुणले भरिएको हुन्छ । छाला, कपाल र स्वास्थ्यको लागि अम्बाको पातको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ ।
अम्बाको पातबाट पाइने फाइदाहरु
– अम्बाको पातको रस निकालेर खानाले शरीरको तौल कम गर्न सकिन्छ ।
– मधुमेहका रोगीले अम्बाको पात सेवन गर्नु निकै लाभदायक हुन्छ ।
– अम्बाको पातको रस पिउने गर्नाले उच्च रक्तचाप कम हुन्छ ।
– पखाला लाग्दा अम्बाको पात खायौँ भने पखाला रोकिन्छ ।
– पाचन तन्त्रको तन्दुरुस्त राख्नको लागि अम्बाको पात लाभदायक मानिन्छ ।
डन्डिफोर, दाग वा पोतो देखी तन्दुरुस्त हून मुलाको प्रयेाग यसरी गर्नूहोस
प्राकृतिक पाचक हो मुला, मुलाले भोज्य पदार्थ सजिलै पचाउँछ । आयुर्वेदले पनि यसलाई पाचक समेत भनेको छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई सुचारु र मजबुत राख्छ । अनेक रोगका कीटाणुलाई शरीर बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।मुलामा किसिम किसिमका खनिज पदार्थ पाइन्छन् । यो रक्त शोधक समेत हो । आयुर्वेद अनुसार, मासिक धर्ममा गडबडीका कारण अनुहारमा डन्डिफोर निस्कने समस्याबाट ग्रस्त युवतीहरूले दिनहुँ मुला खानु लाभदायक हुन्छ ।
मुलाले रगत सफा मात्रै गर्दैन, रक्त सञ्चारमा समेत लय ल्याउँछ । यसले छालामा भएका दाग वा पोतो निको पार्छ । मुलामा गन्धक हुन्छ, त्यसैले यसको गन्ध नै धेरै प्रकारका रोग निको पार्न सहायक हुन्छ ।मुलामा भिटामिन ‘ए’ पनि पाइन्छ । त्यसै कारण यो तरकारी आँखाका लागि फाइदाजनक छ । आयुर्वेद अनुसार, जाडो याममा सधैं बिहानपख एउटा मुला खानेहरूको आँखाको ज्योति वृद्घावस्थासम्म राम्रो हुन्छ, आँखालाई अन्य रोगले पनि हतपती सताउँदैनन् ।
अब त गर्मी याम लागिसक्यो, तैपनि मुला सेवन गरी अनेकानेक फाइदा लिन सकिन्छ । मुला हरेक प्रकारको पाइल्स -बवासिर) हटाउन लाभदायक मानिन्छ । मृगौलाको खराबीले पिसाब बन्न बन्द भए मुलाको रस सेवन गर्नु अत्युत्तमहुन्छ । यो मधुमेहमा पनि लाभकारी हुन्छ । यो हरेक मौसममा पाइए पनि चिसो याममा पाइने चाहिँ उत्तम गुणस्तरको मानिन्छ ।मुला नियमित सेवन गर्ने व्यक्ति स्वस्थ, उत्साहित एवं उमंगले भरिपूर्ण हुने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । यसले शरीरको गुमेको ऊर्जा फिर्ता ल्याउन सहायता गर्छ । छालामा चाउरी भएकाहरूले सधैंसधैं मुला खाने गरे शरीरको चमक पूर्ववत् हुन बल मिल्छ ।
एक सय ग्राम मुलामा प्रोटिन ०.७ ग्राम, कार्बोहाइड्रेट ३.४ ग्राम, बोसो ०.१ ग्राम, ऊर्जा १७ मिलिग्राम, खनिज ०.६ ग्राम, क्याल्सियम ३५ मिलिग्राम, फाइबर ०.८ ग्राम, फस्फोरस २२ मिलिग्राम, नायसिन ०.५ मिलिग्राम, भिटामिन सी १५ मिलिग्राम, आइरन ०.४ मिलिग्राम, क्यारोटिन ३ मिलिग्राम, थायमिन ०.०६ मिलिग्राम, राइबोफ्लोबिन ०.०२ मिलिग्राम र पानी ९४.४ ग्राम हुन्छ । त्यसैले, सधैं मूला खाऔं, सधैं तन्दुरुस्त रहौं ।नोट :-[लाइक , कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला ताकि अरूले पनि केही ज्ञान पाउन सकोस